Accueil > Gazetin'ny nosy > NTY SY NDAY
NTY SY NDAY
Tandremo àry tsy hamita-bahoaka eo !
Mbola mampikaikaika sy mampimenomenona ny maro hatrany ny tsy fitsaharan’ny fidangan’ny vidim-bary. Nanambara ny minisitra ny Varotra, Chabani Nourdine tamin’ny faran’ny herinandro teo fa
« hisy vary milanja 10.000 taonina nohafarana avy any ivelany izay hoenti-mampidina sy manamarin-toerana ny vidim-bary ». Nofaritany fa atao izay hihenan’ny vidim-bary ka heverina ho 70.000 ariary ny iray kitapo amin’ny 50 kilao amin’io vary nohafarana io. Izany hoe ho 1.400 ariary ny kilao izany na ho 400 ariary ny iray kapoaka. Dia nampanantena ity minisitra ny Varotra ity fa « tsy misy tokony hahatahoran’ny mpanjifa intsony ».
Eny, tsara izany fa ny tena fahombiazan’izany tetika izany no andrasana. Hatramin’ny omaly aloha dia tsy mbola nihetsika ny vidim-bary fa mbola eo anelanelan’ny 2.100 ka hatramin’ny 2.300 ariary ny kilao. Raha mihatra tokoa io vidim-bary nambaran’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny minisitra ny Varotra io, haharitra hatramin’ny rahoviana re izay 10.000 taonina e ? Dia hiverina any amin’ny 2.100 ariary indray ve ny vidin’ny iray kilao aorian’io ?. Eo no mahatonga anay hanamarika avy ahtrany hoe « tandremo àry tsy hamita-bahoaka eo».
Marihina avy hatrany fa na nisafidy ny fanalalahana ny tsena aza isika ka ny lalànan’ny tolotra sy tinady no hoe mibaiko dia aza hadinoina fa foto-tsakafon’ny Malagasy ny vary, ary amin’izao fotoana ankatoky ny maitso ahitra izao dia efa zary foana ny sompitra ny tantsaha. Noho izany, tsy afaka hihalangalana amin’ny hoe « ny lalànan’ny tolotra sy ny tinady ny mihatra » ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy miditra an-tsehatra manelanelana mba hanalefahana ny vidin’izany foto-tsakafon’ny Malagasy izany. Any aoriana any, rehefa miakatra ny vary vao dia afaka misintaka ny fanjakana, fa mialohan’izany dia mbola karazan’ny famelana ny vahoaka malagasy holalaovin’ny mpijirika sy ireo karana mpanafa-bary ny raharaha.
Ny tsikombakomban’ny karana mpanafa-bary amin’ny tompon’andraiki-panjakana moa dia tsy ferana ao anatin’izany rehetra izany.
Izay manan-tsifina, aoka izy hihaino.